अचानक के भयो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई? भेटघाट बन्द – Dainik Sangalo
अचानक के भयो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई? भेटघाट बन्द
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १९, २०७८ समय: १६:२९:२७
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी परेका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनी पार्टीका गतिबिधिमा सक्रिय थिए । उनको स्वास्थ्यमा समास्या देखिएपनि अवस्था भने त्यस्तो चिन्ता गर्नु नपर्ने बालकोटबाट खबर आएको छ । उनि अहिले निवासमै आरम गरिरहेका छन्। त्यस्तो आतिनु पर्ने अवस्था नरहेसको उनका प्रेस सल्लाहकार रामशरण बजगाईंले बताए।
पार्टी विभाजनपछि नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा सक्रियता बढाएका ओलीले अस्वस्थ महशुस गरेपछि भेटघाट बन्द गरेका छन् । उनका प्रेस सल्लाहकार रामशरण बजगाईंका अनुसार दैनिक दौडधुपको धपेडीका कारण अध्यक्ष ओली शुक्रबारदेखि अस्वस्थ बनेका छन् । अस्वस्थ भएका केपि ओली अहिले बेडरेस्ट गरिरहेका छन्।
बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा आराम गरिरहेका ओलीले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाट बन्द गरिएको उनले बताए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दुई पटक सम्म मृगौला प्रत्यारोपण गरिएकाले उनी हरेक समय चिकित्सकको प्रतक्ष्य निगरानीमा रहने गर्छन् ।
Last Updated on: September 4th, 2021 at 4:29 pm